Dhammsa Atatama Oromoo maraaf, wal balaaleefachuu dura qoorachuun barbaachiisadha !!!
Caaraqii OPDOn goodha jiru irratti dhagan darbatamu hin qabu. !!! Falami OPDOn egalte Oromoof caaraa dha male bala miti. !!!
Namoon tokko tokko siirna Ango hunda qabate jiru siirna garbonfata TPLF diina keenya 1faa fi Ango qabate nu garbnfachuuf kan folata jiru Amhara diina keenya 2faa dhisan OPDO diina Oromoo tokkofa goodhu. Kun siyysa walaluu utuu hin tane ergama TPLF fi Amhara gegesudha. OPDOn sochi isaan ji'a murasa kana gegesa jiran xifuma qabsoo Oromoti lubu hora malee hin ajeesu, soochin isaan haga fayyida fi mirga Oromoo hin dhiibinti Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaaf caaraa Joker tokko qabachuu dha male akka balati ilaale diina goodhachuu hin qabnu. OPDO gara umata akka dhabatu goochuuf irrati hojeechutu nu basa male diinati achii dhibun nu hin basuu. Wari Habasha waliin hojeechun fira bayyisuu qabna diina bayyisuu hin qabnu jeetan, OPDO maliif irrati hojeetan fira hin goodhatan?. Biyya Ethiopia keessa Bala tokko yoo dhalatef waan qabun kan umata birra goruu OPDO ta'ee yoo argame mal jeetu?, Oromoo irra Tigire fi Amhara na wayya nami jeedhu yoo jirate nama Oromoo burjajeesuu barbadu qoofa dha. Oromoo diina isaa hama dura lolu qabu durse lolu qaba. OPDO ergama TPLF rawwachu kana hunda gooti yoo ta'ee umani matan isaa dhaga itti guruu egala. OPDOn kana booda TPLF jala lixee umatan midha yoo jeete ofiin isheetiin of baleesiti.
Gaafaa Prezidaantiin Oromiyaa duran Obbo Alamayo Atomsa lafa Oromiyaa Nannoo Finfinne takuun tokko iyuu cite Finfinneti hin dabalamuu jeedhe Maaster Plaan Oromiyaa qoofati qoophesise kanuman ciniiname summi obbassan ajjeesan Obbo Alamayon Maliif du’ee jeedhe namni falmee ykn namni garan gubate murasa, keessumati OPDOn million 4 yeroo Oganan isaan ajjeefamu finciiluu hin dandeenye haa ta’uu malee diida argisisa turan. Alamayo Atomsa lafa Oromoo fi Mirga Oromoo dabarsine hin lanuu jeechuu isaan ittigaafatammuma OPDO irra busani hojii male yeroo mana akka turu goodhan nan yaadadha. Alamayo Atomsa TPLF Tigirayti galuu qabdu Oromiyaa kan bulchuu qabu OPDOn ana jeedhe kan dubate bara 2000 dura Galma Mana Mootumma isaa guda keessatti yeroo hiriyan isaa Alamayo namni jeedhamu ajjeefame akka dubate hiriyoon isaa ragaa ba’uu Jeechoota Alamayoon Malasin jeedhe guyyaa tokko saba Oromoof gutuu isaan ibsa. Haqi nama dhokate Hatuu fi Sobdun farfamu hin qabdu.
Gaa’eli OPDO fi TPLF diigama jira, Prezidaanti Oromiyaa Obbo Lama Magarasaa balaaleefachun TPLFn gargaru dha.
Fixiinasa Xumura Garbuman wal qabate mormiin sabni Oromoo geggesen fi midhan saba keenya irra ga’ee, Oromiyan humna waraanan buluu ishee, kana irra darbe ammoo TPLF waraana humna Adda Tigire qoophese maqa soba (Somale Liyuu Polisi) itti maxansee Oromoo fi Oromiyyati bobasun isaa OPDO gutmatti mufachiisee jira. Prezidaantiin Oromiyaa Obbo Lama Magarasaa yeroo lama fi Sadi mediati ba’uun goocha siirna gabronfata (TPLF) balaalefate jira. Tarkanfi barbaachisa ilee fudhatan jiru Hararege erga ilaale deebi’ee booda Oromiyaa gutuu irra Polisota Oromiyaa qindeesun gara Hararget ergu yaalee ilee humna waraanaa Ethiopian qabaman Magaala Harariiti hidhamun isaan median ibsame jira. Rakko dargagoota hikuuf Oromiyaan waan goochuu qabdu ilee ifati dubate jira. Oromoon ala ta’ee iyuu akkasi onnee gutuun dubatu murasa innumtuu yoo jiratef. nama mana nyataa bante gaafasuma qabsa’uma isaa gate Ambassaderota TPLF waliin dhiichisu egalen beeka kan waan xiinooti of gurguru.
Garuu OPDOn Diaspora ergamtoon TPLF fi AG7 Prezidaantiin Oromiyaa Obbo Lamma magarasaa gaafasuma Balaaleefachuu egalan. Diasporan (Aktvistoon) dhuga dubatuu, warii biyya kijiba akka dubatan enyuutu madale? Moo namni yoo biyya baqate hundi goota ta’aa? Utuu ijoolleen xixiqqoon FXG irratti falmatu Diaspora meeqatu Konduminiyem fudhachuuf biyyati gale? yeroo dhiiri dhiira birra dhabate akkasi dubatu Diasporan biyya ala ta’ee wal nyatu Oromoof mal waan buseef galaateefatame inni biyya keessaa diina fulaa dura jiru balaaleefatama? TPLFtu barrese itti keene, toofta ittin saba Oromoo bulchuu qoophefata jira, kijiiba dubata kkf Obbo lama Magarasaa irratti dhaga gurgudan darbatama jira. Warii dula kana egale ammoo Ogannota dhaabbilee Oromoo fi namoota iitigaafatamuma qaban utuu hin tane Neo-Minilikan (Amhara) fi wara Nafxanyaa Moofati heerumuf kara barbaadu actvistoota (Diaspora Amhara OPDO) dha.
Obbo Lama Magarsaa Abban barbaade Barrese itti haalatuu, ofi isaatti yaadee hadubatuu diina dura dhabate waraqa malee onnee gutuun kana dubachuun isaa goota fi dhiira Oromoon qabduu isaa tasisa. Akka ani ilaaletti Obbo Lama kan dubaachiise bareefama TPLF itti late ykn tooftaadhaaf utuu hin tanne dhiiga Oromoo TPLF dhangalaaftetu isaa duubachiisa jedhen amana yakkaa qeeroo Oromoo irratti rawwatametu onnee isaa late jedheen abdadha.TPLF akka kanaan dura Obbo Lama Magarsa qosatti angoo irra busuuf ari’achuuf mirga hin qabdu uummatni Oromoo ilee hyyamaa hin latuuf. Yoo akka Alamayu Atomsa ajeesan ilee Siidaa Gootootatu isaani ijjaramu qaba malee isaa hin balaaleefachisu. Durse Obbo Lama Magarasa kan Balaaleefachuu egale ESATtv fi Nafxanyoota Moofadha kana duba waatu jira jeedhen yaade qoorachuu egale. Miseensa OPDO ta’ee wagoota 28 darban kana keessati akka Lama Magarsaa TPLF durati Afaan Gutate dhiiri dubate Alamayo Atomsa Malee hin jiru. OPDO fi sabi Oromoo mormii OPDOn TPLF irratti egalee gargaruu qabu, OPDOn ilee tarkanfi atatama hedduu fudhachuu qabu. Inni dura:
- OPDOn qabsoo Qeerroon Oromoo, Baratoon Oromoo fi uumani Oromoo gegesa jiru deggeruu qabu male dabarsan TPLFf laachuu hin qaban.
- Uummata Hararge, Bale, Guji fi Borana irratti lola Waraanaa wayyane maqa “Somale Liyuu Polsi” jeedhun geggesa jiru tarkanfi keessa deebi hin qabne fudhaachuun, uummata deggerani Oromiyaa keessa qulqulesu qabu.
- Ba’aa fi Lixa Kibba fi Kabban Danga Oromiyaa siiriti kabaachisuu fi mirga Oromoo Oromiyaa keessa egsisuu qabu.
- Oromiyaa keessatti Tigire Murasa Soromsuuf Qoote bula Oromoo kumataama buqisuu dhabasisuu qabu.
- Oromiyaa fi Finfinee keessati nama Afaan Oromoo siiriti bareesu fi dubatuu malee hojii Mana bunati ilee akka hin qacaramne goochuu qabu.
- OPDOn Paarlamaa keessati bayyina qabuun fayadame saba fi sablamii dabalate Seera TPLF basuu hunda kufisuu qaba.
- Fayyidan Oromoon Finfinnee irra barbaaduu Finfinne mataan ishee lafa Oromoo waan tateef Oromiyaa jalati buluu fi Afaan Oromoon hojeechuu akka qabduu murtesu qoofa.
- Mirga Oromoo bakka hunda fi sadarka hundati tokko ta’an kabaachisuu qabu.
- Liyu Polisiin TPLF utuu Oromoo ajjeesa jiru OPDOn TPLF irra ajaaja fi hariroo tokko iyuu fudhachuu hin qaban gaa’ela isaan diigu qabu, OPDO qoofa utuu hin tane warii Nafxanya Moofati heermtan hundi gaa’ela keessan diiguu qabdu Oromoon abbaa biyymaa isaa qoofa barbaada waan ta’ef.
OPDO bakka isaan saba keenya midhanti balaaleefachuu bakka isaan sabaf dhabatanti ammoo deggeru fi tumsu dha malee yeroo isaan TPLF irratti qabsa’uu egalan ala teenye duban dhaga itti darbaachuuf hamilee(moralii) hin qabnu. OPDO fi TPLF tokko goone ilaalun keenya siyaasaa dogoggora waan ta’eef siyaasaa keenya xinxale siirefachuu qabna. Tigire fi Oromoon tokko ta’uu hin danda’u. Garbonfata fi cunqurfaman wal qixaa ilaalamuu hin qaban. TPLF fi OPDO addan bafne balaaleefachuu addan bafne gorfachuu qabna, gara diinati dhibu hin qabnu.
Diina funyan ishee jala ta’ee qabsa’ee argen jira, hangami ulfata dararama atami anif maatiin koo akka dabarsine Miseensa WFDO qoofa utuu hin tane, OPDOn ilee hundi ni beeku, hara yeroo OPDOn goocha TPLF balaaleefatan nuu ammoo duban isaan rukutun TPLF garggaruu ta’a. Anni kan na ajaaju samuu koof safuu saba Oromooti. Wanan sodadhu hin qabu haqa dubachuuf TPLF ykn Nafxanyoon Moofan waan miciiru danda’an miti. Anni nama hin bitamne fi hin gurgguramne dha dhuga dubaachuun feedha kooti, dhuaga dha jeedhe wanan iti amanef falmachuun mirga koo ta’uu nama beeku dha. Kanaafin lammi Oromooti dhammadhe.
Dhaabile Oromoo biyya ala jirtan fi biyya keessa jirtaniif dhamasa isaa dhumman qaba. Uummani Oromoo Danga Oromoo hunda irra jiru Waraana TPLF liyuu Polis (Agazi) dhumata jira. Oromiyaa keessati Bulchinsi Oromoo hunda diigame Waraana Feederalatu saba keenya ajjeese ukamse garbonfate samaa jira. Ijoollen Oromoo Afaan Amhara hin beekan jeedhaman hojii federala fi Finfinnee irra akka hin hojeene goodhamani lamii lamaffaa ta’aan biyya isaani keessati tuftaman jiru. TPLF dargagoota Oromoo beeka biyya aritee Galana fi Onngeen akka dhuman goocha jirti, ijoolle durba Oromoo biyya Arabati guggurte ajjeesisa jirti. Sabi keenya haalaa kana yeroo dararama jiru kanati Amanta Ganda fi Ilaachan wal qoodne olola wal irrtti ofun fi wali keenya dhifne diina waliin hariro ummachuu irra wal dandeenye saba keenya salphina basuuf OPDO dabalate dhabbileen Oromoo atataman tokko ta'uun dirqama keenya ta'uu beeku qabdu. Yoo tokko tane malee dararami, ajjeecha fi samichi Oromoo irratti geggefamu dheerachuu mala, rakko keenya xixiqqoo dhifne humna keenya gutuu diina irratti haa hojeenu.Oromoo atataman hala dure tokko malee ifa fi dhoksan wal qunamnun saba keenya garbuma jala akka bafnun waamicha koo isiini dabarsa.
Kanaafuu dhaamsi koo rakko saba keenyaf dafne akka furmata barbaanuuf male tokko farsee tokko balaaleefachuuf akka hin tane Oromoon hundi akka na beektanin feedha. Yoo tokko tane malee dararami, ajjeecha fi samichi Oromoo irratti geggefamu dheerachuu mala, rakko keenya xixiqqoo dhifne humna keenya gutuu diina irratti haa hojeenu. Yoo facane ni salphana yoo tokko tane diina keenya salphifna.